Bulsho ku midaysan dheeshiyo ciyaaraha | SASCA Manchester
HomeBulsho ku midaysan dheeshiyo ciyaaraha
Bulsho ku midaysan dheeshiyo ciyaaraha
June 5, 2015 dave porter Somali language version stories
Xirriirka wanaagsan ee ay la leeyihiin kooxda Manchester City awgiis ayay waxeey u sahashay ciyaaryahanada WPSC ( Withworth Park Social Club) inay soo saaraan ciyaartooy aad u wanaagsan, amaba u dhigmana heer professional ah sida ciyaar yahanka Muqtaar Afgooye.
Naadigan ayaa marmarwalba mark aka danbeeysa sii xoogeeysanayay ilaa iyo intii la aas aasay sanadkii 2008, hadana naadigana waxa uu gacanta ku hayaa 5 kooxood oo kale ah: Koox waxii 10 sano yar ah, koox 13 waxii ka yar ah, koox 14 waxii ka yar ah, koox 15 waxii ka yar ah iyo koox ka kooban ciyaartooy dadoodu kala duwantaha.
Kooxahani na waxeey dhawaanahan soo hooyeen guulo waaweey, sanadkii la soo dhaafay ee 2104, kooxda 15 jirka dadoodu ka yartahay waxaay ku guuleesteen koobka Tame Side sports League , kooxda dhalinyarada da,dooda ka yartahy 14 jirkana waxeey labo mar ku guuleeysteen koobka Manchester Junior League, halka kuwa 13 jir da’dooda ka yartahayna aay finalka gaareen.
Farah Cadoow oo 34 jir Soomaaliyeed ah ayaa isagu xaga tababarrada kooxdan, waxeeyna tababar ku qaataan garoonka Manchester City oo ku yaala Yew Tree Road. Kooxda WPSC waxaa ka tirsan ilaa 120 ciyaartooy oo da’doodu kala du duwantahay una dhaxeeyso 5 jir ilaa 20 jir. Waxaana xataa ka mid ciyaartooytaas ka mid ah carruurta macalin Faarax.
Ciyaartooydani waxay tababar sameeyaan 2 jeer todobaadkiiba , waxaana dhawaanahan naadigu sameeyay koox isugu jirta gabdho iyo wiilal si ay gabdhuhu uga barbar ciyaaraan wiilasha. Marka laga reebo macalin Faarax naadigan waxa uu leeyahay 4 macalin oo kale. Ciyaartooyda naadigan waxay kaloo ka qeeybqaateen Champions League ee yurub kaasoo lagu qabtay Manchester, halka lagu magacaabo Platt Lane, taasina waxay sii xoojisay xirriirka naadigan kala dhaxeeyo Manchester City.
Faarax ayaa waxa uu sheegay in caqabada ugu weyn ee haaysata naadiga ay tahay qarash la’aan, taasoo uu xusay iney tahay wax ay la wadaagaan naadiyada kale ee yar yarka ee uu heerkoodu hooseeyo, iyo waliba gaadiid la’aan carruurta lagu geeyo garoomada maalmaha sabtida iyo axada ayuu sii raaciyay Mr Faarax.
“Kubada cagta aad ayaa looga cayaara Soomaaliya, kubada laliska aad baa looga cayaara sidoo kale,.” ayuu yiri macalin Faarax
Mr Mohamud Geeseey oo ah guddoomiyaha ururka Somali Youth Basketnball ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaalida eek u dhaqan magaaladan Manchester ineey ayeey aad uga helaan kubada laliska, waxuu kaloona xusay in urrurkiisa isna la ‘aas aasay sanadkii 2008. Mr Geessey oo haaysta shaahadada level 2 ee xaga cayaaraha ayaa waxa kale oo uu sheegay in isaga macalin Ahmed Lass aay tababaraan dhalinyarada dadooda u dhaxeeysa 11-13, kuna tababaraan halka lagu magacaabo Power House Gym oo ku yaala Moss Side iyo xarunta kubada laliska ee Amaechi kuna taala Whalley Range High School.
← Codkaaga iyo Bulshadaada
Sasca oo ku howlan horumarinta danaha bulshada →